အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဉီးအောင်စိုးသည် Sumitomo Corporation Asia & Oceania Pte. Ltd. မှ General Manager ဖြစ်သူ Mr. T. ONISHI ဉီးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့၊ (၁၁:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဉီးအောင်စိုးသည် Sumitomo Corporation Asia & Oceania Pte. Ltd. မှ General Manager ဖြစ်သူ Mr. T. ONISHI ဉီးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဝန်ကြီးရုံး၊ ဧည့်ခန်းမ (၂) ၌...
ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ၊အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့(CPU)နှင့်ပတ်သတ်၍ အသိပေးကြော်ငြာခြင်း
Thursday Talk ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့၊ နံနက် (၀၉:၃၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၌ နှစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ် ကြာသပတေးနေ့တိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Thursday Talk ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့မှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်နီနီဇင်ဉီး က “တရုတ်-မြန်မာ...
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူး ဦးဆောင်၍ Digital Trade and E-Commerce ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဆပ်ကော်မတီ ပထမအကြိမ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးမှ ဥက္ကဌအနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် “Digital Trade and E-Commerce ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆပ်ကော်မတီ” အနေဖြင့် ပထမအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၃၀)နာရီ အချိန်တွင်...
မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့၏ ရုံးသစ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် တက်ရောက်
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့၊ (၀၈:၁၅) အချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့၏ ရုံးသစ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် တက်ရောက်
ဒုတိယဝန်ကြီး ဉီးအောင်ထူးသည် Japan International Cooperation Agency မှ Expert on Intellectual Property ဖြစ်သူ Ms. Hiromi TAKAOKAအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့၊ (၁၁:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဉီးအောင်ထူးသည် Japan International Cooperation Agency မှ Expert on Intellectual Property ဖြစ်သူ Ms. Hiromi TAKAOKA ဉီးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဝန်ကြီးရုံး၊ ဧည့်ခန်းမ (၂) ၌...
E-Commerce Strategy ရေးဆွဲရာတွင် အထောက်အကူပြုအဖြစ် National Consultant တစ်ဦးခန့်အပ်ရန် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
EIF Tier-2 အဆင့်အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ ဝန်ဆောင်မှု ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍ မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်း (Myanmar Services Trade Enhancement Project – MSTEP) ၏ အောက်မှ E-Commerce Strategy ကို UNCTAD အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းရေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ E...
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် Mr.Cyril Sayag ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့၊ (၁၃:၃၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် Mr.Cyril Sayag, Vice President of Corporate Affairs (Sustainability and Responsibility) Pernod Ricard Asia, and Chairman of APIWSA ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် Shanxi ပြည်နယ်၊ ပြည်သူ့အစိုးရ၏ ဒုတိယပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်သူ H.E. Mr. Wang Yixin ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့၊ (၁၁:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ Shanxi ပြည်နယ်၊ ပြည်သူ့အစိုးရ၏ ဒုတိယပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်သူ H.E. Mr. Wang Yixin ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် ရန်ကုန်မြို့၊ ဂျာမဏီနိုင်ငံသံရုံး၏ Head of Cooperation ဖြစ်သူ Mrs. Marianna Knirsch ဉီးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့၊ (၁၄:၃၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် ရန်ကုန်မြို့၊ ဂျာမဏီနိုင်ငံသံရုံး၏ Head of Cooperation ဖြစ်သူ Mrs. Marianna Knirsch ဉီးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဝန်ကြီးရုံး၊ ဧည့်ခန်းမ (၁) ၌...